INDLU ENTSHA SHA EVELA KUMBUNGAZI OVELELE! - I-Airbnb
INDLU ENTSHA SHA EVELA KUMBUNGAZI OVELELE!
Wyandotte, Michigan, i-United States
Letha umndeni wonke kule ndawo enhle enendawo evulekile yokuzijabulisa noma umane nje uhlale nabangane ngenkathi usedolobheni. Ikhaya lethu liseduze ne-Downtown Wyandotte enesitolo esikhulu sokuthenga nokudlela. Futhi singaphansi kwamamayela ambalwa ukusuka e-Detroit River! Hlala endaweni yethu ukuze ujabulele enye yezindawo ezishisa kakhulu zase-Detroit zemidlalo yokudoba namanzi asehlobo!
Ikhaya lethu litholakala endaweni ethulile nethokomele yase-Wyandotte Michigan. Singaphansi kwamamayela angu-1/2 ukusuka e-Detroit River futhi amamayela angu- ukusuka e-Downtown Wyandotte egcwele isikhathi esihle sokuthenga nokuzijabulisa kwasebusuku. Ama-bar, izindawo zokudlela, nokuningi konke kuhlinzekwa ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo komunye nomunye kanye nemizuzu engu-5 ye-Uber.
Silapha ukuze sikusize phakathi nenqubo yakho yokungena. Uma udinga noma yini eyengeziwe phakathi nokuhlala kwakho mane nje ufinyelele enkundleni ye-Airbnb futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuba siyamukele.
Hlola ezinye izinketho ezise- Wyandotte namaphethelo